गफाडी ऋचा २ वर्षपछि गलिन्
घटना धेरै अघिको होइन । ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतमले आफु अभिनित चलचित्र ‘अनुराग’ १ हप्तामै करोड क्लबमा पुगेको भन्दै केक काट्न तम्सिइन् । सिटी सेन्टरमा रहेको बिग मुभिजमा केक काट्न तयार भएकी उनलाई एक पत्रकारले यस्तो वाइयात काम नगर्नुस् भनेपछि उक्त केक यत्तिकै उपस्थितिले हात हात राखेर खाए । उनले किन त्यसो गरिन् त ? यो दर्शकलाई भ्रम पार्न गरिएको थियो । उनले त्यसबेला भन्दै थिइन्, ‘यति हल्ला गरेपछि दर्शक आउँछन् कि ?’
ऋचा शर्माको कुरा पनि उनको जस्तै थियो । चलचित्रलाई भएको देखाउन त्यसबेला ऋचा र अभिनेता अर्पण थापाले जे गरे त्यो गल्ती रहेछ, जुन कुरा अहिले आएर ऋचा आफैले खुलासा गरेकी छिन् । उनले निर्माण र अभिनय गरेको चलचित्र ‘सुनकेसरी’ ले रिलिजको पाँच दिनमा १ करोड ४ लाख कमाएको भन्दै हलमा केक काटेर कलाकारसहित पत्रकार र अरु केहि अतिथिलाई खुवाइएको थियो ।
महंगो रकममा विदेशमा चलचित्र झिकाउन उनले त्यसबेला गरेको हर्कत उनी निकटले मिडियामा बताइसकेका थिए, तर उनीहरुले त्यसबेला केहि बोलेनन् । चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै हिँडे ।
अर्पण थापा निर्देशित यो चलचित्र हरर जनरामा निर्माण भएको थियो । तर, डराउने सिनमा दर्शक हाँसेको भन्दै चलचित्रको कडा आलोचना भएको थियो । केक काटेपनि, करोड क्लबमा पुगेको हावा गफ फैलाएपनि यो चलचित्र फ्लप भयो ।
यतिले मात्रै उनीहरुको गफको श्रृङ्खला रोकिएन । त्यसबेला चलचित्र ‘सुनकेसरी २’ बनाउने समेत उनीहरुले घोषणा गरे । तर, ऋचाको टिमले अहिलेसम्म उक्त चलचित्र बनाउने विषयमा दोस्रोपटक मिटिङ गरेको छैन ।
सोमवार मात्रै ऋचाले एक प्रशंसकको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उक्त चलचित्र डिजास्टर भएको स्वीकार गरेकी छन् । यो भिन्न फिल्म हुन सक्छ । हरर शैलीमा एक गेम चेन्जर । नकेसरी’ ले हरर फिल्मलाई न्याय गरेको छ ? भन्ने प्रशंसकको प्रश्नमा जवाफ दिइन्, 'तर, डिजास्टर भयो ।'
सधै सहि प्रश्नमा गलत जवाफ दिने र गलत काम गर्ने ऋचा २ वर्षपछि कसरी गलिन् ? सबैले अचम्म मानेका छन् ।
यी हुन् संसारकै सबभन्दा सुन्दर युवती !
दोस्रो छोरा जन्माउँदा करीना कपूर ट्विटर ट्रेन्डिङमा